माग्दै हिँड्दा भेटिएका यि अनौठो जोडी, यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी हेर्नुस् – Dailny NpNews
माग्दै हिँड्दा भेटिएका यि अनौठो जोडी, यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी हेर्नुस्
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २२, २०७७ समय: १२:४७:३०
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा आजभोली अनौठो लाग्ने घटना सार्वजनिक हुन्छन् । अस्वभाविक लाग्ने वैवाहिक जोडीको अनौठो कहानीलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भित्रि पी डा भने देखाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्युज पाउन अस्वभाविक देखिने कुरालाई नै रोमान्टिक पारामा प्रस्तुत गरिएको हुनछ । तर उनीहरुले त्यस्तो अस्वभाविक निर्णय किन लिए ? त्यसको पछाडीको कारण के हो ? भन्ने कुरा भने आउँदैन ।